Njikwa ogo mma, nnabata nke nnweta gọọmentị - GIS
Lelee nkọwa →
Ihe mkpuchi, ngwaahịa mmiri, Ire na ndị ọzọ.
Ngwaọrụ Eletrọniki & Ngwaọrụ, Ngwa & vidiyo, Ngwaọrụ Kọmputa, Ìhè na Ìhè, Kọmputa, Ekwentị.
Chemical akụrụngwa na ngwaahịa kemịkalụ, Chemicals na mgbakwunye, fatịlaịza na fatịlaịza Akụrụngwa, ngwaahịa kemịkalụ nke ụlọ.
Ihe mkpuchi, akwa akpụkpọ ụkwụ, akwa ụlọ, akwa, akpa na akpa akwa, ngwongwo ndị ọzọ dị nro.
Ngwaọrụ Electromechanical ， Akụkụ igwe ， Akụkụ onwe ya ， Pump ， Mmanụ ， ining mepụta akụkụ ， Die casting parts Akụ akụkụ.
Ihe aka, ihe ndi ezi na ulo, ihe ndi eji edebe ulo, ihe ndi eji ewu ulo, ihe eji egwu egwu, ihe egwuregwu, ihe eji eme oria, ihe ndi eji eme Stone.
Ọrụ Kachasị Mma Maka Gị
GIS (General Nnyocha Ọrụ Co., Ltd.) bụ ọkachamara dị elu nke injinịa na njikwa njikwa ọrụ njikwa. Ekpebisiri ike inyere ndị ahịa aka ịmalite ma melite mmesi obi ike na njikwa mma, yana inyere ndị ahịa aka ịzụlite ma nyochaa ndị na-eweta ha. Site na 2005, GIS enwetawo njikwa njikwa nke Nchịkwa izugbe nke Nlekọta Ogo…
Ọchị chọrọ na Ekele
Nkwenye GIS General Manager maka ikpe ziri ezi
Nnapụta dịpụrụ adịpụ-General Nnyocha Ọrụ Co., Ltd
Nwatakịrị nwanyị nọ na GIS hụrụ nwamba mehiere, nyere aka saa ahụ, ma ziga ya n'ụlọ ọgwụ anụ ahụ maka nyocha na ọgwụgwọ dị egwu. N'ikpeazụ, ọ nyere aka ịchọta onye nkuchi maka cat a dara ogbenye. Themeans, nwamba ahụ nwere ezi ezinụlọ. Ms.Titania, anyị n’ekele obi oma gị.
Full Online Nnyocha , Na Usoro Nnyocha , akpa Loading Supervision , Factory Assessment , mbụ Production Check , Nke atọ Party Nnyocha ,